नेपाललाई नहेप्न युरोपियन युनियनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी (भिडियोसहित) | Rajmarga
नेपाललाई नहेप्न युरोपियन युनियनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी (भिडियोसहित)
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई नहेप्न युरोपियन युनियनलाई चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको गरिबीलाई लिएर जे पनि गरेहुन्छ भन्ने मासिकताबाट युरोपियन युनियनले नेपालको सार्वभौम सत्ता र प्राप्त उपलब्धिलाई अवमुल्यन र हेप्ने काम गरेको बताए । युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न दिएको सुझाबलाई लिएर सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ ।
आइतबार राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई अण्डरस्टिमेट नगरी आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउन युरोपियन युनियनलाई सचेत गराए।
प्रतिवेदन सच्याउन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै यथावत राख्ने वक्तव्य निकाल्नुले नेपाललाई अण्डरमाइण्ड गरेको महशुस आफुले गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको सजगता निकै राम्रो भएको भन्दै नेपालकै जस्तो समानुपातिक समावेशी तथा महिला प्रतिनिधित्व गराएर देखाउन चुनौति दिए । उनले निर्वाचन अनुगमनको नाममा गर्न लागिएको धर्म प्रचारलाई रोकेको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा देखाइएको दाबी पनि गरे ।
उनले भने “निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा आएर धर्म प्रचार गर्ने होइन, धर्म प्रचार गर्ने काम हुन नदिन केहीलाई फिर्ता पठाइएको हो , त्यसको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा लिने होइन । प्रतिवेदन प्रतिवेदन हुनुपर्छ । ”युरोपेली युनियनको प्रतिवेदनले आफ्नो चित्त दुखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुधार्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको भुमिकाको पनि चर्को आलोचना गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादव पनि उपस्थित कार्यक्रममा उनले निर्वाचनका समयमा आयोगले गरेको क्रियाकलाप प्रति तिखो टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन सम्पन्न गराएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र अदालतलाई धन्यवाद दिए।
Previous post: डब्लुडिएनवाई सन्जिबकोे पहिलो गीत ‘देखेर तिमीलाई’ सार्वजनिक
Next post: तपाईलाई थाहा छ, के हो हाम्रो खुसीको रहस्य ? यो किन जरुरी छ ? कसरी हुन्छ प्राप्त ? के हो खुसी ?